Isinxibo sendoda yaseGrisi yakudala | Ukuhamba kwe-Absolut
Isinxibo sendoda yaseGrisi yakudala
Isinxibo se Indoda yesiGrike yamandulo Wawungalingani nomzimba kodwa wawukhululekile, ngesiqhelo yayiluxande lwelaphu elalisongela umzimba kwaye libanjwa ngentambo, ukubamba okanye ukwenza nje imithungo.
AmaGrike ayengabanxibelelanisi bamalaphu afana ne isilika, umqhaphu, ilinen nditsho nolusu lwezilwanyana, neflakisi lwalukhuliswa eAsia Minor.
Ilokhwe yendoda yayiqulathe iziqwenga ezibini, ezingaphakathi zibizwa chiton kunye nengubo yangaphandle okanye i-heation amadoda awazange anxibe iimpahla zangaphantsi phantsi kwengubo.
I-chiton inokuba yi-Doric okanye i-Ionic, i-Doric yayiqulathe uxande lwelaphu elalisongele umzimba ngokukhululekileyo kwaye lalirhangqwe ngebhanti okanye ibroshi.
I-chiton yayide ide ifike ezinyaweni, yayibizwa ngelo xesha ngamandla e-chiton, ngaphantsi njengoko babenganxibi zangaphantsi, ihempe yayifana nehempe, i-Ionic yayenziwe ngelinen.
Ngokwenene yayiyilokhwe yokulala enemikhono eyayiwela ezantsi kwengqiniba, inokunxitywa ngabo bobabini abesilisa nabasetyhini, kwaye yayifanelekile iminyaka ephakathi.
Ingubo okanye i-citwvn ibibotshelelwe emagxeni ngezikhonkwane okanye iiribhoni kwaye zilungiswe ngebhanti, ukulala khange bayisuse ingubo njengoko ibisebenza njengehempe yosuku kunye nengubo yokulala ebusuku, abancinci banxibe iimpahla ezimfutshane ngaphandle ukubopha.
La exomida Yayiyi-ovaroli yamakhoboka, amagcisa kunye namajoni, yayiyilokhwe emfutshane ebotshelelwe esinqeni ngebhanti kwaye ibotshelelwe egxeni ngeqhina elalibavumela ukuba babe nenkululeko enkulu yokuhamba.
El isinxibo Yayililaphu loboya elisisikwere elalibekwe emzimbeni ukuze ingalo yasekunene ivezwe kwaye ikhohlo ligutyungelwe.
La chlamys into erhabaxa yayiyingubo esetyenziswa ngamajoni, ikapa evulekileyo kwaye edadayo, abantu abancinci bayisebenzisa kuba ivumela ukuba bazikhulule iingalo zabo zombini.
Into abayithathileyo ukulala ibhandeji, iingubo ezinde ezinde ezinyaweni, zisebenza njengemihombiso nakwimisitho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Isinxibo sendoda yaseGrisi yakudala
Iphepha elilunge kakhulu, ndiyalithanda. Ndingunyaka we-1 unyaka wesidanga se-bachelor's degree kwaye ndiyayithanda iGrisi kwaye ndicinga ukuba eli liphepha elihle kakhulu.
UYareny Saravia sitsho
Kweli phepha awuyi kufumana yonke into umntu ayijongileyo, kodwa ke, siya kuyikhathalela yonke into ………………
Phendula yareny saravia
pos kum kubonakala kulungile ukuba babeka ezo zinto, kodwa zivela phi iimpahla zabafazi nabantwana.
Banxibe iorita embi kakhulu, ifashoni yahlukile